I-CINETEATRO Lux - Palermo
Ukuhlanganiswa kweshashalazi ne-cinema.
4.9 /5 amavoti (amavoti angama-17)
Il I-CINETEATRO Lux ngo-Francesco di Blasi 25 a Palermo kungobabili Indawo yaseshashalazini che Cinema, ukuze unikeze amakhasimende ayo ukukhetha okubanzi kwemibukiso. Sekuphenduke i I-IMAX ngonyaka wezi-2015 ngokuphathwa okusha kwe-Orazio Bottiglieri.
I-CINETEATRO Lux ePalermo - Izindawo eziningi
Il I-CINETEATRO Lux enhliziyweni ka Palermo inekamelo elikhulu elinezihlalo ezingama-400, isimo somoya, ukufinyelela kwabakhubazekile, uhlelo lomsindo nesizukulwane esisha. Kulokhu Cinema ungakujabulela konke ukukhishwa okusha kwe-movie noma ukubathole njalo imisebenzi emidlalo yaseshashalazini ihlelwe njaloIndawo yaseshashalazini. Kusukela ngo-2015 Inkundla yemidlalo yeshashalazi yaseLux a Palermo ihlinzeka ngemibukiso eyahlukahlukene kukho konke ukunambitheka. Kanjani ngokuchitha ubusuku obuhlukile kulokhu Cinema/Indawo yaseshashalazini?
I-CINETEATRO Lux ePalermo - Imibukiso eyahlukahlukene
Il I-CINETEATRO Lux ngo-Francesco di Blasi a Palermo inikeza imibukiso yabancane nabadala. Ukuba ngu- Cinema uzothola yonke imibono yokuqala yefilimu futhi ngoba nayo i Indawo yaseshashalazini, kunemibukiso eminingi yemidlalo yaseshashalazini ohlelweni kusihlwa sobumnandi nokukhanya kwenhliziyo ngemidlalo ebukhoma. The I-CINETEATRO Lux ePalermo è isakhiwo sanamuhla e ilungele labo abathanda ukusebenzisa isikhathi sabo samahhala bathokozela imizwa yefilimu ebukekayo noma ukuhlonza ngombukiso weshashalazi. Thola Cineteatro Lux ePalermo.
I-CINETEATRO Lux ePalermo - ama-workshops weshashalazi
Uma ungumuntu othanda Indawo yaseshashalaziniit I-CINETEATRO Lux yindawo yakho. Ihlela imihlangano yokubonisana yemidlalo yeshashalazi efanele labo abathanda ukwenza futhi baqeqeshe ingqondo ngalobu buciko. Futhi ngaphezu kwalokho ibuye ibe ngu-a Cinema enikeza ukubuyekezwa kwamafilimu ngamanani asizayo. Imibukiso yezingane kanye nabantu abadala: yilokhu I-CINETEATRO Lux di Palermo. Uzothola isakhiwo sezidingo zawo wonke umuntu njengokuphonswa kwetshe kusuka kuwe. Iya ku- I-CINETEATRO Lux.
I-CINETEATRO Lux ePalermo - Izingqungquthela nezingqungquthela
Il I-CINETEATRO Lux ngo-Francesco di Blasi 25 a Palermo è Cinema e Indawo yaseshashalazini kodwa hhayi kuphela: ilungele imihlangano nezingqungquthela. Isikhundla sakhe sinelungelo, enkabeni ye Palermo, ungasasho iqiniso lokuthi ungasebenzisa izinsizakalo ezinjengokuqagelwa kwevidiyo, insiza yokwamukela, izivakashi zezingqungquthela, njll. A I-IMAX njengoba I-CINETEATRO Lux iyindawo ekahle yemihlangano yakho nezehlakalo ezisondele enhliziyweni yakho. Shayela I-IMAX ngolwazi oluthe xaxa noma usidlulisele ukubuza konke ofuna ukukwazi. Igumbi lokuhlangana njengoba kufanele litholakale I-CINETEATRO Lux ePalermo.
Ikheli: Nge-Francesco di Blasi, 25
I-POSTAL CODE: 90144
Ucingo: 091 348990
Inombolo ye-VAT: 06425660823